Semalt सल्लाह: Use उपयोगी वेब स्क्र्यापि & र सामग्री एक्स्ट्रक्शन उपकरण
वेबसाइटहरू स्क्र्याप गर्ने र सामग्री निकाल्ने अनलाइन व्यवसायहरूको लागि साझा डाटा एकत्रित कार्य हो। साइटहरूको एक ठूलो संख्या को scraped छन्, र डाटा दैनिक आधार मा निकालिन्छ। केहि परियोजनाहरू विस्तृत सफ्टवेयर र उपकरणहरूको साथ गरिन्छ, जबकि अन्य म्यानुअल तरिकाले पूरा गर्न सकिन्छ। तलका सफ्टवेयर मात्र महान छन् तर नि: शुल्क पनि छन् र तिनीहरूको प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्दछ।
iMacros वेब ब्राउजरहरूको लागि एक विस्तार हो र प्रोग्रामरहरू र गैर प्रोग्रामरहरूको लागि उत्तम सफ्टवेयर मध्ये एक हो। यसले तपाईंलाई क्याप्चर र वेब गतिविधिहरू पुन: प्ले गर्न अनुमति दिन्छ जस्तै परीक्षण, डाउनलोड र छविहरू र पाठ अपलोड गर्न। यसले तपाईंलाई डाटाबेस, सीभी र एक्सएमएल फाइलहरू र अन्य संसाधनहरू प्रयोग गरेर आयात र निर्यात गर्न सजिलो बनाउँदछ। iMacros ले वेब परिक्षण र क्रलिling सम्बन्धित कार्य पूरा गर्दछ।
प्रम्प्टक्लाउड व्यापक रूपमा यसको अनुकूलित वेब स्क्र्यापि ,, वेब क्रलिling र डेटा निष्कर्षण सेवाहरूको लागि परिचित छ। यो अनलाईन व्यवसाय र स्टार्टअपको लागि उत्तम हो र विभिन्न भाषाहरूमा र फरक प्लेटफर्महरूबाट तपाईंको लागि टन डेटाहरू निकाल्न सक्छ। यसले टेक्नोलोजीहरूको विस्तृत एर्रे प्रयोग गर्दछ तपाईको काम ठीकसँग सम्पन्न गर्न। तपाईं ब्लगहरू, सामाजिक मिडिया साइटहरू, समीक्षा वेबसाइटहरू, अनलाइन फोरमहरू, र ट्राभल पोर्टलबाट जानकारी स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ।
WinAutomation एक विश्वसनीय र प्रामाणिक स्वचालन उपकरण हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई बिभिन्न कार्यहरूमा सहयोग गर्दछ। यस सफ्टवेयरले तपाईंलाई फारामहरू सबमिट गर्न, स्थानीय डाटा फेला पार्न, वेबसाइटहरू स्क्र्याप गर्न, र छविहरू र पाठको रूपमा निकालेको डेटा बचत गर्न मद्दत गर्दछ। तपाई एक्स्ट्र्याक्ट डाटालाई एक्सेल पानाहरूमा टाँस्न सक्नुहुनेछ, विभिन्न प्रकारका कार्यहरू ह्यान्डल गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंको फाईलहरूलाई उत्तम तरिकाले व्यवस्थित गर्नुहोस्। WinAutomation ईमेल पार्सि and र डेस्कटप प्रबन्धन कार्यहरूको लागि पनि उपयोगी छ।
भिजुअल वेब रिप्पर एक भिजुअल सफ्टवेयर हो जुन वेबसाइटहरू स्क्र्यापिंग, डेटा कटाई, र उपयोगी सामग्री तुरून्तै झिक्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो एक सब भन्दा शक्तिशाली उपकरण हो। यसले खोज इञ्जिनहरू, उत्पाद क्याटलग, र समाचार आउटलेटहरू मार्फत सामग्री सlects्कलन गर्दछ, तपाईंलाई उत्तम परिणामहरू दिन्छ। यस उपकरणले वेब पृष्ठहरूबाट डाटा पनि पुन: प्राप्त गर्दछ, तपाईंलाई मात्र सहि र अपडेट जानकारी डाउनलोड गर्न मद्दत गर्दछ।
WebHarvy एक दृश्य स्क्र्यापिंग प्रोग्राम हो जुन स्वचालित रूपमा विभिन्न वेब ढाँचाहरूको पहिचान गर्दछ र तपाइँका लागि उपयोगी डेटा स .्कलन गर्दछ। यसले पाठ, छविहरू, ईमेलहरू, र यूआरएलहरू सहित दोहोरिएका पृष्ठहरूलाई पनि स्क्र्याप गर्दछ। WebHarvy तपाईंलाई वेबसाइटहरूबाट डाटा स्क्र्याप गर्न दिन्छ जुन प्राय: उनीहरूको डाटा एक्स्ट्रक्ट हुन दिदैन।
Dar. डार्सी रिपर
डार्सी रिपर जाभामा आधारित वेब क्रलर र डाटा एक्स्ट्रक्टर हो। यो यसको प्रयोगकर्ता-मैत्री, ग्राफिकल ईन्टरफेसका लागि परिचित छ र सेकेन्डमै राम्रो संरचित डाटा डाउनलोड गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। डार्सी रिपरले तपाईलाई डेटा र डाउनलोड फाईलहरूको लागि कुनै पनि यूआरएल प्रक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ विभिन्न ढाँचामा।
U. यूबट स्टुडियो
यूबोट स्टुडियो एक उत्तम र सब भन्दा भयानक वेब स्क्र्यापिंग र सामग्री निष्कर्षण कार्यक्रमहरू मध्ये एक हो। यो दुबै निःशुल्क र सशुल्क संस्करणहरूमा आउँदछ र वेब-आधारित अनुप्रयोग हो। यूबोट स्टुडियोले हामीलाई स्क्रिप्टहरू निर्माण गर्न र डाटा खनन, वेब परीक्षण, र सामग्री व्यवस्थापन जस्ता विभिन्न कार्यहरू पूर्ण गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं यसको फाईलहरू डाटाबेसमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ वा केही मिनेटमा नै तपाईंको हार्ड डिस्कमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।